HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Nzema Ossète Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tiorka Tseky Tsonga Twi Télougou Umbundu Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
“Manampy ahy foana ry Dada sy Neny ka manome an’izay rehetra ilaiko. Mba nanampy an-dry zareo koa àry aho tamin’ny herintaona rehefa nanana olana ry zareo. Simba be ny aotomobilin-dry zareo tamin’izay ka izaho no niantoka ny nanamboarana azy, na dia lafo be sy tsy maintsy nihena be aza ny tahiriko. Tsy nanaiky ry zareo tamin’ny voalohany, nefa nisisika ihany aho. Mbola betsaka noho izany aza no tokony hataoko amin-dry zareo. Sady tiako erỳ ilay manome zavatra ho an-dry zareo.”—Holly.
“Avy any Etazonia aho no nifindra tany Meksika mba hampianatra Baiboly. Tsy manam-bola firy aho ka tsy dia afaka manome vola na zavatra ho an’olona. Fantatro anefa hoe rehefa manome ny fotoanako sy ny heriko hampianarana olona aho, dia izany no tena ilaina noho ny hoe manome vola na zavatra.”—Evan.